Lango malefaka, lainga mahalefaka… | NewsMada
Par Taratra sur 03/12/2016
Fandre amin’ny kabarin’ny mpitondra ny lango malefaka: manambitamby, mampandry adrisa, mandrebireby. Misy tokoa ny manao rapa-dango, rehefa sendra izay mpandangolango: mino azy, manantena sy miandry zavatra.
Mahabe sy mampirongatra ny lango malefaka ny kabary amin’ny fampielezan-kevitra, ny fahatongavan’ny vahiny isehosehoana sy isekosekoana, ny fanamarinan-tena ho tsy manaiky diso na lehibe tsy meloka, ny fampanantenana lava…
Resahina izany fa mirongatra ny lango malefa sy fandangolangoana vahiny tato ho ato, na resaka amboamboarina amin’ny mpanao gazety vahiny. Fa hafa be izay lazaina amin’ny samy Malagasy: olom-pirenena tsotra, mpanao gazety…
Mihevitra ny vahiny ho tsy mahalala ny zava-misy eto an-toerana ve ny mpitondra ka manao lango malefaka? Na mora langolangoina ny eto an-toerana, ka manao rapa-dango izay rehetra lazain’ny mpitondra… lainga raofina mahalefaka.
Manomboka eo ny hoe lainga mahalefaka na mahadala, manimba saina tsy tsaroana ho azy: izay mandainga amin’ny voalohany, mandainga hatrany hanamarin-tena fa tsy sahy miatrika ny fahamarinana sy mifanazava amin’ny marina.
Atao sesi-montotra, ohatra, ny filazana fa nakana ny hevitry ny rehetra ny nandrafetana ny lalàn’ny serasera… mamoritra. Nefa novain’ny mpitondra an-dalana ny ankamaroany: tsy henatra, tsy tahotra, na feon’ny fieritreretana akory.
Eo ny hoe fangaraharana tamin’ny tolotrasam-panjakana ny nananganana ireo fotodrafitrasa tamin’ny Frankofonia, ahin’ny firaisamonina sivily ho misy kolikoly. Vitan-dresaka ve izany, fa tsy havoaka ho fanta-bahoaka ny marina?
Ohatra roa faramparany ireo ny amin’ny lango malefaka, lainga mahalefaka… Be ny raharaha andraofana lainga toy ny fanondranana andramena, fitrandrahan’ny Sinoa tany, ny kolikoly ao anaty fanjakana, ny kiantranoantrano…
Tsy mahalala izany ny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ka anaovana lango malefaka? Na bodo sy adala ny vahoaka ka fahanana lainga mahalefaka… Raofina ihany toy ny lainga, fa raha feno: raraka. Rehefa ela no andaingana: vaky ihany.